MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-05-12
at 5/18/2013 10:47:00 PM No comments:
at 5/18/2013 09:30:00 PM No comments:
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းတို့၌ တာရှည် ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခများ
ကြောင့် တရားမ၀င် သစ်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် တင်ပို့မှုတို့မှာ သိသိသာသာ တိုးလာကြောင်း ဒေသခံများ
လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် တောပြုန်းခြင်းနှင့် မြေအခွင့်အရေးများ
ကို လေ့လာနေသူ သုတေသန တစ်ဦးက ဧပြီလဆန်း လောက်က တရုတ်နယ်စပ်မြို့ ရူလီအနီး၌
တွေ့ရှိခဲ့သည့် အဖြစ်ကြောင့် တုန်လှုပ်သွား ခဲ့ရကြောင်း ပြောသည်။
at 5/18/2013 09:27:00 PM No comments:
at 5/18/2013 04:57:00 PM No comments:
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်နှင့် မူဆယ် ကြား ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်ရင်း ၉ နယ်မြေတွင် အစိုးရတပ်နှင့် KIA တပ်ဖွဲ့ကြား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် (16.5.2013) အချိန်တိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲသည် ဒတ်နိုင်း (Daknai)၊ မန်ကန် (Mang Kang) ပလောင်ရွာဟောင်းတွင် တပ်ရင်းအမည်မသိရသော အစိုးရစစ်ကြောင်းနှင့် KIA ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ (Mungshawa Hpyen Hpung - MHH) ကြား ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်သည်။
at 5/18/2013 10:49:00 AM No comments:
at 5/17/2013 10:27:00 PM No comments:
at 5/17/2013 10:26:00 PM No comments:
at 5/17/2013 07:15:00 PM No comments:
at 5/17/2013 06:59:00 PM No comments:
at 5/17/2013 05:35:00 PM No comments:
Majan wan shachyi na kun? Majan wan shazim na kun? Ngu ai ndai GA SAN? Lahkawng gaw a-dingtawk PANGLUNG GA SADI hta sha madung rai nga ai. Panglung ga’sadi si taw nga dingsa majan wan gaw chyi taw nga chyalu sha re. Dai hte maren. Panglung ga’sadi hpe asak bai jahkrung lu jang majan wan hpe shazim lu na.
at 5/17/2013 04:28:00 PM No comments:
at 5/17/2013 04:05:00 PM No comments:
at 5/17/2013 12:16:00 PM No comments:
at 5/17/2013 12:04:00 PM No comments:
at 5/16/2013 10:02:00 PM No comments:
at 5/16/2013 10:00:00 PM No comments:
at 5/16/2013 05:20:00 PM No comments:
at 5/16/2013 12:18:00 PM No comments:
at 5/16/2013 10:08:00 AM No comments:
at 5/15/2013 11:05:00 PM No comments:
at 5/15/2013 09:55:00 PM No comments:
at 5/15/2013 01:54:00 PM No comments:
at 5/15/2013 01:53:00 PM No comments:
at 5/14/2013 10:32:00 PM No comments:
at 5/14/2013 10:31:00 PM No comments:
ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများ ဖယ်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC က ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း စဉ် လေ့လာဖို့ လာမည့် အပတ်၌ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အိုင်ယာလန် မြောက်ပိုင်းကို ထွက်ခွါ မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရသည်။
ဥက္ကဌကြီး အဲန်ဘန်းလဦးဆောင်သည့် အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာ၊ ဒေါက်တာခင်မောင်၊ ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦးမှ ဦးဆော်လမွန်၊ လားဟူအဖွဲ့မှ ဦးဆော်လမွန်နှင့် ကေအိုင်အိုမှ ဦးဘွမ်ဝမ်လာရော်တို့ လိုက် ပါကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါသည်။
at 5/14/2013 09:59:00 PM No comments:
at 5/14/2013 08:23:00 PM No comments:
at 5/14/2013 06:09:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) အုပ်ချုပ် နယ်မြေဖြစ်သော မြစ်ကြီးနား - ဗန်းမော် ကားလမ်းပေါ်ရှိ နမ်ဆန်ယန် လီဆူးနှစ်ခြင်း ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်မှ ရွှေတူးဖော်နေကြာင်း သတင်းရရှိပါသည်။ နမ်ဆန်ယန်၊ ဒွမ်ဘန်ဘွမ်တွင် တပ်စွဲထားသော ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်များသည် မြကူးသွယ် ကုမ္မဏီနှင့်ပူးပေါင်းကာ ရွှေတူးစက် (၃) လုံးဖြင့် လီဆူး နှစ်ခြင်းအသင်းတော် ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်း ရွှေတူးဖော်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
at 5/14/2013 03:06:00 PM No comments:
at 5/14/2013 01:39:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော ဂန်ဒေါင်ယန် ကျေးရွာ အခြေစိုက် ဗမာအစိုးရ၏ တပ်မ (၃၃) လက်အောက်မှ စစ်ကြောင်းများသည် မေလ (၁၃) ရက် မနက် (၈း၃၀) နာရီ အချိန်ခန့်တွင် အရပ်သားပြည်သူများ၏ အိုးအိမ်များကို ဖျက်ယူကာ၊ ဂန်ဒေါင်ယန် ဆုတောင်းတောင်ကုန်းပေါ်၌ စစ်တပ် စခန်းများကို တည်ဆောက်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
at 5/14/2013 07:24:00 AM No comments:
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ဘန်ခမ်းနယ် မန်ဆော်ကျေးရွာမှ ရှမ်းအမျိုးသား ဦးအောင်လ (အသက် ၄၁) နှစ်ကို ဗမာအစိုးရစစ်သားများမှ မေလ (၁၀) ရက်နေ့ ညနေပိုင်း (၃း၀၀) နာရီခန့်အချိန်တွင် ဓါးနှင့်ခုတ်သတ်ပြီး အင်မောင်ချောင်း အတွင်းသို့ ပစ်ချခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဦးအောင်လ သည် မန်ဂွန်ရှိ စိုက်ချင်းသို့ အသွားတွင် အမည်မသိ ဗမာစစ်ကြောင်းမှ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ ချောင်းအတွင်းသို့ ပစ်ချခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
at 5/14/2013 07:21:00 AM No comments:
မြန်မာအစိုးရတပ်သည် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) မုန်ဂိုးဒေသသို့ စစ်အင်အားများ ဆက်လက်တိုးချဲ့လာကာ တိုက်ပွဲများလည်း ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရသည်။
မေလ ၁၂ ရက် ယမန်နေ့ညတွင် မုန်းဂိုးဒေသ ပန်ဆိုင်း (ကြူကုတ်) သို့ အစိုးရစစ်ကား ၁၀ စင်း၊ အင်အား ၂၀၀ ကျော်ဖြင့် ပို့ဆောင်လာကြောင်း ရှေ့တန်း စစ်ဗိုလ်များမှ သိရသည်။
၎င်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တို့သည် မေလ ၁၃ ယနေ့နံနက်တွင် ၎င်းပန်ဆိုင်းမှ အထက်သို့ ခြေလျှင်ဖြင့် အသီးသီးထွက်ခွာသွားကြောင်း မျက်မြင်များ ပြောသည်။
at 5/13/2013 08:07:00 PM No comments:
at 5/13/2013 06:35:00 PM No comments:
at 5/13/2013 06:25:00 PM No comments:
မဆလ ခေတ်မှာ အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ လက်သုံးစကား ရှိတယ်...
မလုပ်... မရှုပ်... မပြုတ်.. တဲ့။
လုပ်ရင် ရှုပ်မယ်... ရှုပ်ရင် ပြုတ် နိုင်တယ်လေ....
at 5/13/2013 11:54:00 AM No comments:
at 5/12/2013 06:19:00 PM No comments:
at 5/12/2013 06:18:00 PM No comments:
at 5/12/2013 09:03:00 AM No comments:
at 5/12/2013 08:47:00 AM No comments:
at 5/12/2013 08:44:00 AM No comments: